Toban qodob oo la rumeysan karo… – Akhbaarta Wanaagsan
Toban qodob oo la rumeysan karo…
Posted on January 28, 2018 January 28, 2018 by Maroodiga
… in uu Ilaah Surgaad bani-aadam qatay oo uu nin noqoday.
Dadyowga dunida ku nooli badankooda waxay si weyn u beeniyaan in uu Ciise Masiix uu qaatay surad bani-adam ah iyaga oo ku candacooda in uu Ilaah waxana dhaliin ama aan la dhaliin.
Waxaan doonayaa in aan eegno tobanka qodob oo aan rumeysan nahay in uu Ilaah Suurad bani-aadam qatay oo uu nin noqoday.
Tani kowaad waa : wuxuu ka dhashay naag bikrad ah.
Haddii ay maryam runta runta sheegeyso ilmaheedu malahan abbe aduunyo. Waxay iyadu sheegtay ina Malaigta Ilaah ay u muuqtay oo ay ku tidhi waxaad ilmo ku ureysan doontaa Ruuxa Ilaah, oo waxaad ilmaha magaciisa u bixiin doontaa Ciise, kaasi oo loogu yeedhi doono Wiilkii Ilaah.
Waxaana Ruuxii Quduuska ahaa u muujiyey inaanu dhimasho arag intaanu Rabbiga Masiixiisa arkin. Oo wuxuu Ruuxii ku galay macbudka, oo goortii waalidkii keeneen wiilkii Ciise ahaa inay caadadii sharciga ku sameeyaan, markaasuu gacmihiisa ku qaaday, oo Ilaah ammaanay, oo yidhi, Rabbiyow, imminka addoonkaagu nabad ha ku tago, Sida hadalkaagu ahaa, Waayo, indhahaygu waxay arkeen badbaadintaada, Tan aad dadka oo dhan hortiis hagaajisay, Oo ah iftiin quruumaha lagu muujiyo, Iyo ammaanta dadkaaga Israa’iil. Markaasaa aabbihiis iyo hooyadiis ka yaabeen waxyaalihii lagaga hadlay isaga. Simecoon ayaa iyaga u duceeyey, wuxuuna hooyadiis Maryan ku yidhi, Ogow, wiilkan waxaa loo dhigay dhicidda iyo kicidda kuwa badan oo Israa’iil ku jira, iyo calaamo ka gees ahaan lagaga hadlo, si ay qalbiyo badan fikirradoodu u muuqan doonaan. Adigana seef baa naftaada ka mudh bixi doon”( Lukoos 2:26-35).
Haddii ay Mariam ay been shegtay marka dhalashii Ciise Masiix quduuska ma ahateen oo waxyabaha ay dadka qaarkood ku candacoodaan ayaa rumoobi lahaa. Laakiinse sidee baan ku ogaan karnaa? Haddii ay qisada Ciise Masiix aysan aheyn sida ku qoran Kitaabka quduuska ah, sow ma noqoteen wax lagu qosolo oo lala yaabo? Tani waxaan ugu jawabi karnaa “haddii ay aysan jiriin markhtiyaal goob joog ka ahaa, oo wax caddeyn ah aysan jiriin, waxaan si fuduud beeni laheyn waxa ay Mariam sheegtay. Haddii uu nolosha Ilmaheedu noqon lahaa sida ilmi kale oo kale marka dhalashadii uu ka dhalashay bikrad waxay noqon laheyd qiso si fuduud oo aay beenin karo.
Qodobka 2aad – Nabiyadii hore waxay si waxyoodeen inuu Ilaah suraad bani-aadam qaadan doono.
Waxaa hubal oo aan wada ognahay in qarnigii todobaad uu Nabi Ishacyaah si waxyooday adeegaha Ilaah ee dunida xukumi dooni maalmaha ugu dambeyo. Nabigu wuxuu sheegay in dunida oo dhan nabad ku noolaan doonto oo ay Jerusaleem u tagi doonaan si ay Ilaah u caabudaan sida ku qoran Kitaabka Ishacyaah cutuubka 2aad. Nabigu wuxuu qoray “Waayo, waxaa inoo dhashay ilmo, waxaa layna siiyey wiil, oo boqornimadu garbihiisay saarmi doontaa, oo magiciisana waxaa loo bixin doonaa Ka Yaabkaleh, iyo Lataliye, iyo Ilaaha Xoogga leh, iyo Aabbaha Daa’imka ah, iyo Amiirka Nabadda”. (Ishacyaah 9:6). Nabigu wuxuu si sheegay sida uu Ilmahaan u dhalan doono oo wuxuu yidhi waxyigaan nusu wuxuu buxisami doono inta uu asaga nool yahay. “ Haddaba Rabbiga qudhiayaa calaamad idin siin doona. Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta, oo waxay dhali doontaa wiil, oo magiciisana waxay u bixin doontaa Cimmaanuu’eel”. (Ishacyaah 7:14).
Qodobka 3aad – Mala’igta ay sii sheegtay dhalashadii.
Adhi jidhki Beytalaxaam korkeeda adhi ku dajinayey waxaa u muuday raxaan Mala’igaha oo waxay taasi ku rumoowbay waxyigii Mariam iyo Nabi Ishaciyaah waayoo horey loo waxyooday. Kitaaabka Lukoos Cutuubka 2:8-waxay inoo caddeynesaa in adhi jidhi reer binu Israa’iil ay soo booqatay oo ay u sheegtay inuu Masiixa ay dadkooda muddo badan ay sugaayeen ku dhashay Beytalaxaam. “ Dalkaas waxaa jiray adhijirro bannaanka jooga oo habeenkii idahooda ilaalinaaya. Malaa’igtii Rabbiga ayaa ag istaagtay, oo ammaanta Rabbiga ayaa iftiimisay hareerahooda, aad bayna u baqeen. Markaasaa malaa’igtii ku tidhi, Ha baqina, waayo, ogaada, waxaan idiin keenay war wanaagsan oo leh farxad weyn oo u ahaan dadka oo dhan. Waayo, maanta waxaa magaalada Daa’uud idiinku dhashay Badbaadiye oo ah Masiixa Rabbiga ah. Oo waxaa calaamo idiin ahaan tan, waxaad heli doontaan ilmo maro ku duuduuban oo ku jiifa qabaal. Dhaqsoba waxaa malaa’igtii la jirtay guuto fara badan oo jannada ka timid, wayna ammaanayeen Ilaah oo lahaayeen, Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya, Xagga dhulkana nabad ha ahaato dadka ka farxiya Ilaah dhexdooda”.
Ayadaha 10-12aad sidii ay ahdi jirka sheegeen samadda waxaa ka buxsamay mala’igo Ilaah ammanayo leh sida ku qoran ayadda 14aad “ Ilaah ha ku ammaanmo meelaha ugu sarreeya, Xagga dhulkana nabad ha ahaato dadka ka farxiya Ilaah dhexdooda”.
Qodobka 4aad – Astaan ayaa samadda ka muqtay
Sida ku qoran Axdiga Cusub xidig ifeyso ayaa samada ka muqday oo u dhacay sidii Mariam loogu sii shegay. Sadex nin oo xigmada leh oo ka yimid bari ayaa soo racay xidigta Masiixa ilaa ay soo garaan magaladda Yuhuuda ee la odhan jiray Beytalaxaam. Waxayna halkaasi ku arkeen Ilmo ay rumeysteen in uu yahay Masiixi Yehuuda ee mudada dheer la sugayey. Boqolaal sano Nabiyaddii Axdiga Hore waxay ka hadlayeen xidi9gta Masiixa iyo hankoolkiisa ee ka soo bixi doono reer binu Israa’iil sida ku qoran Kitaabka Tirintii cutuubka 24:17aad. Waxaan qoran sidatan “Isagaan arkaa, haddase ma aha, Waan u jeedaa, mase dhowa, Reer Yacquub xiddig baa ka soo bixi doonta, Reer binu Israa’iil waxaa ka soo kici doonta ul
boqortooyo, Oo waxay burburin doontaa rukummada Moo’aab, Oo waxay baabbi’in doontaa dadka Shee
d oo dhan. “ Waxay kale oo nabiyaddii Axdiga Hore si waxyoodeen xogamiyaha reer binu Israa’iil in uu ka imaan doono magalada Beytalaxaam sida ku qoran Kitaabka Miikaah cutuubka 5:2aad, oo leh sidatan” Laakiinse adigu Beytlaxam Efraataahay in kastoo aad ku yar tahay kumanyaalka reer Yahuudah, waxaa adiga iiga kaa soo bixi doona mid dalka Israa’iil taliye ka noqon doona, kaasoo bixitinkiisu ahaa waa hore, iyo tan iyo weligiis”.
Qodobka 5aad – Waxay aheyd wakhtigii ugu haboonaa
Dadka badankood waxay rumeysan yihiin in ninkii xigmada lahaa ee u yimid inay cabudaan Ciise Masiix oo
ka yimaadeen dhulka Baybaloon.Waxaana hubaal ah in ay waxyiga dhalashada Masiix ay ka heleen waxyigii Nabi Daanyeel. Nabi Daanyeel intii dhulkaasi joogay waxaa la tusay waxyi ka turjumayo wakhtiga uu Masiixa dhalan doono afar boqol oo sano ka hore. Sida ku qoran waxyigii Nabi Daanyeel dib u dhiskiimacbuudka Yeerusaleem ee sanadkii 458 ilaa 444 intii usan ciise dhalan ka hore iyo imaditaanka iyo dhimasha Masiixa waxaa u dhexeysay 69 lagu dhuftay todob sida ku qoran Kitaabka Daanyeel cutuubka 7:13-14 “Riyadii habeennimada waxaan ku arkay mid u eg wiilkii aaaha oo ku yimid daruuraha samada, oo wuxuu u yimid, kii da’da weynaa, oo waa loo soo dhoweeyey oo hortiisaa la soo taagay. Oo waxaa la siiyey dowladnimo iyo ammaan iyo boqortooyo, inay dadyowga, iyo quruumaha, iyo kuwa kala afka ahu u wada adeegaan. Dowladnimadiisu waa dowladnimo weligeed jiraysa, oo aan dhammaanayn, boqortooyadiisuna waa mid aan la baabbi’in doonin” iyo 9:24-27 “ Toddobaatan toddobaad baa loo qabtay dadkaaga iyo magaaladaada quduuska ah, in xadgudubka la joojiyo, oo dembiyada la dhammeeyo, oo xumaanta laga heshiiyo, oo la keeno xaqnimo weligeed ah, iyo in la shaabadeeyo waxyaalo lays tuso iyo waxyaalo la sii sheego, iyo in la subko kan ugu quduusan. Haddaba ogow oo garo in tan iyo markii amarku soo baxay in Yeruusaalem la soo celiyo oo la dhiso ilaa uu yimaado Kan subkan oo ah amiirka waxaa ahaan doona toddoba toddobaad, iyo laba iyo lixtoddobaad; haddana wakhtiyada cidhiidhiga ah waa la dhisi doonaa oo waxaa loo yeeli doonaa jidad iyo derbi. Oo laba iyo lixdanka toddobaad dabadood ayaa Kan subkan la gooyn doonaa waxbana ma haysan doono, oo dadka amiirka iman doona ayaa baabbi’in doona magaalada iyo meesha quduuska ah oo dhammaadkiisuna wuxuu ahaan doona mid daad leh, oo xataa ilaa ugu dambaysta waxaa jiri doona dagaal; baabba’na waa la goostay. Oo toddobaad ayuu kuwo baaxdi kula dhigan doonaa: markaasuu toddobaadka badhtankiisa joojin doonaa allabariga iyo qurbaankaba; oo dushiisa waxaa ku iman doona mid wax baabbi’iya ilaa dhammaadkii la goostay lagu dejiyo kan wax baabbi’iya”. Dadka badan waxay amminsan yihiin in waxyigii Nabi Daanyeel u sii shegayo ilaa iyo wakhtigii Ciise Masiix si guul leh ku soo galay magaladda Yeerusaaleem.
Qodobka 6aad – Ciise Masiix wuxuu sheegay asaga iyo Ilaah ay mid yihiin
Kuwo badan waxay ku candacoodaan inu Ciise Masiix weligiis sheegan waxay xeertiisa ku sheegaan asagu.In kasto qilaafka ka yimid wixii uu asaga oo yidhi “Anigu iyo abbaha waa mid”. Mid ka mid ah qorayaasha Axdiga Cusub wuxuu ka weriyey Ciise Masiix inuu yidhi “Anigu waxaan jiray Inraahiim ka hore” sida ku qoran Kitabka Yooxanaa cutruubka 8:58aad “Hadda Muuse wuxuu sharciga nagu amray in la dhagxiyo tan oo kale, adiguse maxaad ka leedahay iyada?”. Sidaasi oo kale markii aan egno Kitaabka Baxintii cutuubka 3:14 oo sidatan” Markaasaa Ilaah wuxuu Muuse ku yidhi, ANIGU WAXAAN AHAY KAAN AHAY; oo weliba wuxuu ku yidhi, Waxaad ku odhan doontaa reer binu Israa’iil, WAAN AHAY baa ii soo kiin diray”. Magacaan waa magacee Ilaah isku muujiyey Nabi Muuse. Rasuul Yooxanaaisna wuxuu qo Masiix ka soo wareyey inuu “ Anigu iyo Abbaha waa isku mid” Sida ku qoran Kitaabka Yooxanaa cutuunka 10:30 “Aniga iyo Aabbuhu mid baannu nahay”. waxaakale oo Rasuulka qoray sida ku qoran cutuubka 10:7aad. Sida ku cad Injiilka Ciise Masiix wuxuu yidhi haddii aad iyo necbaato ama aad I jeceylato waxaad jeceylatay ama necbatay Rabbiga Ilaah ee carshigiisa yahay janadda.
Qodobka 7aad – Saxibadiisa ayaa cabuuday.
Mid ka mid aa xertii Ciise Masiix ee la odhan jiray Toomaas markii uu arkay in uu Ciise Masiix sara kacaywuxuu yidhi “Toomas ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Rabbigay iyo Ilaahayow“. sida ku qoran Yooxanaa cutuubka 20:28. Sanado ka dib mid ka mid ahaa kuwii asaga racay oo la odha jiry Yooxanaa wuxuu qoray asaga oo leh sida ku qoran Yooxanaa cutuubka 1:1-3, 14.” Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah. Isagu Ilaah buu la jiray bilowgii. Wax walba waxaa laga sameeyey xaggiisa, oo wixii la sameeyey lama samayn isaga la’aantii”s. Mid kale oo xeertiisa ka mid ahaa oo la odhan jiry butroos isna wuxuu qoray sida ku qoran butrooska labaad cutuubka 1:1aas oo leh sidatan “Bilowgii waxaa jiray Ereyga, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah“.
Qodobka 8aad – Cadowgiisina waxay ku dacweyeen inuu shirkii sameyey.
Ciise Masiix saaxibadiisa waxay doonayeen inaan rumeysano inuu nabi ka weyn yahay, laakiinse cadwaayaashii ma aysan dooneyniin. Culima’ula diinka reer bin Israa’iil waxaad ugu xumayeen in xogamiyahii ay ku daacadeyeen inuu yahay hoogamiyeyaasha indholayaasha uu dembi cafiin karo, oo Ilaah ugu yidhi Abbahiisi iyo weliba odhan karo aniga iyo Ilaah mid ayaan nahay. In ka badan hal mar hoogamiyeyaashii reer binu Israa’iil ay doonayeen inay Ciise masiix dhagax ku dilaan. Sida ku qoran Kitaabka yooxanaa cutuubka 10:33aad. Waxaan qoran sidatan “ Waxay ugu jawaabeen, Farcankii Ibraahim baannu nahay, oo weligayo addoommo ninna uma ahayn. Maxaad u leedahay, Waa laydin xorayn doonaa?“.
Qodobka 9aad Mucjisooyiinkiisa Ciise waxay taabacsan yihiin wixii uu sheegtay inuu yahay.
Ciise mucjisooyinkiisa ku qoran Kitaabka Axdiga Cusub wey ka weyn yihiin waxyabaha lala yaababa. Waxay ahaayeen calaamadaha. Waxa uu u sameeyey si ay u dhiiri rag iyo dumarka inaad isaga rumaysataan oo nolosha weligeed ah. Waxa uu arkaan nin xoog daran iyo inay qiraan uu xaq uu dembiyada ku cafiyo. Waxa uu quudin kun oo qof qadada yar wiil ee, dejinta oo kaalin ka gaysanaya uu sheegtay in kibista nolosha noqon. Oo wuxuu ku socday biyaha korkiisa, iyo badaha cadhooday aamusiiyey, oo bukaan bogsiiyey, soo celiyo addimada curyaanka, roonaaday inay dhegaysiga aad Indhoole dhagala, iyo xitaa ka soo sara kiciyey ninka dhintay an la mariyey magaciisu yahay Laasaros. Hal sabab oo Ciise sameeyey ahayd si ay u taageeraan sheegashadiisa ilaahnimo. Rasuul Yooxanaa ayaa qoray ” Haddaba waxaa Ciise ku sameeyey xertii hortooda calaamooyin kale oo badan oo aan ku qoray kitaabkan. Laakiin waxyaalahan waxaa loo qoray inaad rumaysataan inuu Ciise yahay Masiixa, Wiilka Ilaah, iyo inaad nolosha ku lahaataan magiciisa idinkoo rumaysanaya”. Yooxanaa 20:30-31.
Qodobka 10aad – SARE UU BAXIIDISU WEY KA WEYNTAHAY YIMATINKIISA.
Dad badan ay taariikhda oo dhan sheegatay inay yihiin Ilaahiyo. Laakiin hal nin oo kaliya ayaa diyaar u ah inay u dhintaan dembiyada dadka kale. Mid ah oo kaliya ayaa dhintay ka soo sara kacay uu caddeeyaan in Uu yahay kan ahaa ina Ilaah. Sida laga soo xigtay Axdiga Cusub dhexdiisa, ka dib markii Ciise iskood ah naftiisa iskutallaabta askari ayaa ku siin, wuxuuna u muuqday in ay ahaayeen xertiisa dhow iyo in ka badan 500 Socotay kale muddo 40 maalmood ah. 1corinthians 15: 5-8). Markhaatiyaal ayaa sidaa aaminsanahay kicistiisa in ay diyaar u silco oo dhinto sheegashooyinka ay ahaayeen. Xertiisii ayaa ku tidhi oo uu iyaga tusay gacmihiisa iyo cagihiisa baqayo, socday oo wuu la hadlay. iyo xitaa la cuntay. Markaas halka ay kulmay Himon la buurtii mOlives, wuxuuna siiyey erayada themhis la soo dhaafay iyo baxay daruuraha. Iyada oo ka tagay oo dheeraad ah spectular badan uu yimid, Ciise nooga tagin faham wanaagsan oo ku dhawaaqay malaa’igta oo yidhi, ” Waayo, maanta waxaa magaalada Daa’uud idiinku dhashay Badbaadiye oo ah Masiixa Rabbiga ah”.
Adiga keligaa ma tihid
Haddii aad qabto dareen isku qasan marka aad ka fikirtid caddaymo ku xeeran nolosha Ciise. Waxaa laga yaabaa in aad dareento ku khasbanayd in ay aaminsan yihiin in Ciise yahay Wiilka Ilaah, laakiin aadan hubin ee xiriirka aad isaga, wuxuuna idin aqbali doonaa. Haddii aad hesho doono dalab of dhaaf, nolosha weligeed ah, iyo ansaxinta galay qoyska Ilaah, wuxuuna noqon doonaa Badbaadiyahaaga, Macallin iyo SayidSayidkaaga.
Haddii aanad waligaa hadda ka heshay Ciise ee sidan ah, waxa aanu kugu dhiirinaynaa in aad si taxadir leh u akhri aayadda New Testament ee Rooma 6:23 “Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada, laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix”. Iyo Roma cutubka 10:13aad “ Waayo, ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa”. Taas oo aan hubiyo in oo u yeedha magaca Rabbi Ciise, kaasaa badbaadi doona. In ay aqbalaan hadiyadda Ilaah, oo aad ku tukatid wax sidan “Ilaah, waxaan ogahay in aan ahay dambiile ah. Waan ogahay in aan anigu iska isma badbaadin karo. Waxaan rumaysanahay in Ciise dhintay oo iskutalaabta dembiyadayda. Waxaan rumeeyey xaqa, wuxuuna u kacay kuwii dhintay ka si ku nool uu noolal rumeeyey Nabigaas oo dhan. haatan waxaan sii dheer oo aan ku heli karnaa badbaadshahayga. aqbali aad dalab dambi dhaaf iyo nolosha weligeed ah. Waad ku mahadsan tahay, Aabbow. intaasi Ciise magaca Ciise ayaanwaan ku baryayaaye. Aamiin “.
Fadlan warqad noo soo qor macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo heli koro noloshaada cusub sida ilmo Ilaah. Sidoo kale, ku baryayaaye, waayo, Ilaah si aad keeni kaniisad in si daacad ah bara Kitaabka Qudduuska ah in ruux ka mid ah jacayl iyo la midnimada Masiixa. Waxaad aqbalay hadiyad ugu weyn oo dhan. Hadiyadda oo Ilaah xaggiisa nagu soo iibsaday.
Posted in Cadeeymaha, QoraalTagged Ciise Masiix, dhalashada Ciise Masiix, injiilka, jesus